Global Voices teny Malagasy » Japàna: Topimaso Amin’i Yasukuni, Ilay Sarimihetsika. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Marsa 2018 15:28 GMT 1	 · Mpanoratra Hanako Tokita Nandika Ntsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Sarimihetsika, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
(Vaovao farany: nofoanana  daholo ireo tetikasa ho fampisehoana ny “Yasukuni” ao amin'ireo efitrano fijerena sarimihetsika any Tokyo.)
Nahatonga adihevitra ny sarimihetsika fanadihadiana iray naha-be resaka momba ilay fasan'i Yasukuni , notontosain'ny Shinoa iray mpanatontosa sarimihetsika tamin'ny alalan'ny famatsiambola nomen'ny masoivohom-panjakana Japoney, taorian'ny nikarakaran'ny vondrona iray eo amin'ny fitondrana, ny LDP, ny fandefasana izany mba hitsarana ny “tsy fiandaniany”. “Yasukuni” izay notontosain'i Li Ying, natao hivoaka any amin'ny trano fijerena sarimihetsika ny 12 Aprily, dia tavela ho fampisehoana tokana ihany hatreto , noho ny finoana fa mety hiteraka “olana” ilay sarimihetsiaka. Avy any amin'ny lohahevitra sy ny fampahafantarana ilay sarimihetsika ny olana, izay mamakivaky ny tantaran'ny fasan'i Yasukuni amin'ny alalan'ny zanakevitr'ireo sabatra namboarina tany Yasukuni, ny 8.100 amin'ireo dia nampiasana tamin'ny ady nandritra ny taona 1933 sy 1945. Nanao famelabelaran-kevitra ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Klioban'ireo Vahiny Mpampifandray ao Japana  i Ineda Tomomi, mpikambana ao amin'ny vondrona LDP, tao anatin'izany no nanazavany ny fomba fijeriny (jereo ny horonampeo  sy ny lahatsary  amin'ny teny Anglisy / Japoney) momba ny fanatontosana ilay horonantsary ary ilay fanapahankevitra nampifanditra be momba ny hijerena ilay sarimihetsika alohan'ny hamoahana azy.
Yasukuni shrine (from Wikipedia, see license conditions )… Fasana Yasukuni (avy amin'ny Wikipedia, jereo ny lisansa)
Maro ny mametraka fanontaniana raha mety ny hamatsian'ny governemantam-panjakana vola ny zavatra heveriny ho fanehoankevitra politika aseho ao anatin'ilay sarimihetsika. Manipika ny fampiasana ny volan'ny mpandoa hetra  ao amin'ilay sarimihetsika ny blaogera Takeda Jumei:
Horonantsary fanadihadiana “YASUKUNI”, notontosan'ny Shinoa iray mpanatontosa sarimihetsika.
Inoy na tsia, fa raha ny hita dia famatsiambola mitentina 7,5 tapitrisa yen no toa natolotry ny Masoivoho momba ny Kolontsaina ao Japana [ho an'ity sarimihetsika ity] .
Nolaniana tamin'io sarimihetsika tsy tia / manohitra an'i Japana io ny hetran'ireo Japoney — moramorainy loatra ny Masoivoho momba ny Kolontsaina.
Japana dia firenena ahitana ny fahalalahana miteny sy ny famokarana sarimihetsika, saingy Shinoa iray mpanatontosa, izay tsy afaka miasa raha tsy misy ny fanohanan'ny mpitondra Shinoa, dia tokony hovokarina avy amin'ny volan'ny Shinoa fa tsy amin'ny hetran'ny japoney.
Inona anefa no dikan'ny hoe “tsy tia / manohitra an'i Japana”? Manontany  ny blaogera dj19:
Inona izany no antsoin'ny olona hoe “tsy tia / manohitra an'i Japana”? Ny fitsikerana [ilay sarimihetsika] amin'ny alan'ny fiantsoana azy ho “tsy tia / manohitra an'i Japana” ary ny fanampenana ny maso sy ny sofin'ny vahoaka mba hifehezana tsotra izao ny fahalalahana maneho hevitra satria fotsiny matahoatra izy ireo sao ho avoakan'ilay sarimihetsika fanadihadiana ireo olan'ny fasana Yasukuni – Mihevitra aho fa hetsika iray fanampiny “tsy tia / manohitra kokoa an'i Japana izany”, fanompàna ireo Japoney.
Nandritra izany fotoana izany, naka ny toerany mba hanohitra ilay sarimihetsika  ny blaogera ponko69:
Niteny ny mpikambana ao amin'ny Dieta, Inada Tomomi hoe “tsy mikasa ny hanao sivana izahay”, saingy sarimihetsika momba ny fasana Yasukuni izy ity, izay miresaka ny fomba fitantanana ny firenena, tsy mahagaga izany raha voasivana izy.
Nomen'ny Masoivoho ara-kolontsaina ao Japana famatsiambola mitentina 30 tapitrisa Yen ilay “Ananata wo wasure nai” , sarimihetsika tsy tia / manohitra an'i Japana, sy ny “Pacchigi!”, izay fiarahamiasan'ny Koreanina sy ny Japoney , ary lasa lohahevitra goavana eny anaty adihevitra.
Manohana ny hetsika tsy tia / manohitra an'i Japana ny Masoivoho ara-kolontsaina ao Japana. Tsy tokony laniana amin'ny fanohanana sarimihetsika izay maneho ideolojia tsy tia an'i Japana ny hetranay.
Mifanohitra amin'izany kosa, manamafy ny blaogera chidakatsu fa tsy olan'ny ny havia / havanana io :
Ary ny zavatra iray hafa, tsy misy idiran'ny hoe avy any amin'ny havia ianao na avy any amin'ny havanana, fa izao fotsiny no tiako ambara hoe rehefa manana fahatokisana amin'ny ideolojianao manokana ianao, dia aza manitatra be an'ireo olana maivana.
Taorian'ny fijerena ilay asa, ivelan'ny zom-pirenena, raha lasa liana amin'ny fisian'ny fasan'i Yasukuni ny olona, na ihany koa mitsidika azy mihitsy, dia heveriko hoe lasa zavatra tsara izany “amin'izay lafiny izay”.
Mahatsapa aho fa misy toe-draharaha iray izay ao anatiny ny olona dia tsy afaka mandefitra ny fisian'ny “hevitra tsy mitovy” na ny zavamisy hoe misy ireny hevitra ireny. [Hita taratra izany] na dia amin'ny feon'ireo mpikambana ao amin'ny Dieta aza.
Naneho ny heviny momba ny hakelin'ilay tena famatsiambola , mitentina 73.000 Dolara Amerikanina ny blaogera virginia-woolf :
Gaga aho amin'ny hakelin'ny fahaizana ara-kolontsain'ireto mpanao politika izay tsy mahatakatra akory hoe fako ireo sarimihetsika tsy misy fitsarana an-tendrony. Olana ihany koa no fahitàn-dry zareo ilay famatsiambola mitentina 7,5 tapitrisa Yen avy any amin'ny Masoivoho ara-kolontsaina ao Japana – gaga aho amin'ny fitarainan'izy ireo hoe 7,5 Tapitrisa Yen fotsiny ve. Any amin'ny kaonsily, manao karazana tombana izy ireo, saingy raha tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny maoraly [ilay fampiaharana], tsy teren'izy ire ny tsy maintsy hanarahana sivana ideolojika. Raha jerenao ihany koa ny fanganana ny tetibolan'ireo sarimihetsika fanadihadiana izay vokarina sy avoaka amin'ny vidiny tena mirary, ny vola 7,5 tapitrisa Yen ho an'ny fanatontosana sarimihetsika iray amiko dia tsy tokony ho zavatra hahatezitra ireo mpanao politika.
Mitsikera  ny zavatra hitany ho toy ny fihatsarana ivelan-tsihy ny blaogera Wally:
Atoa Li Ying, talen'ity sarimihetsika ity, dia Shinoa mipetraka any Japana, ary lazainy fa izay aseho amin'ity sarimihetsika ity dia tsy fankahalàna an'i Japana fa fitiavana an'i Japana aza. Tsy maintsy hoe betsaka ireo Japoney izay tsy mahalala akory ny antony mampisy feo manohitra an'i Yasukuni avy any Azia. Ny fahalalana ny mombamomba an'i Yasukuni sy ny fieritreretana ilay Fasana no hitondra ireo olom-pirenena vaovao izay hieritreritra ny hoavin'i Japana. Ireo olona mpandàla an'i Yasukuni nefa tsy te-hampianatra ny momba an'i Yasukuni, tsy ireny aza ve no tena tsy tia an'i Japana kokoa?
Mifanohitra amin'izany kosa, manambara i Ampontan  fa ity no tranga nahitana fa “manao zavatra tsara ireo mpanao politika, saingy noho ny antony maro diso tanteraka”, ary ireo fanehoankevitra dia tsy tokony hanana toerana amin'ny famaritana ny karazana sarimihetsika afaka mahazo famatsiambola avy amin'ny governemanta:
Na inona na inona fanehoankevitra, dia tsy tokony hiteraka fahasamihafàna izany. Ireo izay manohitra ny fitsidihana an'i Yasukuni dia tokony ho eo amin'ny laharana voalohany ihany koa amin'ny fanoherana ny famatsiambola nomen'ny governemanta ho an'ilay sarimihetsika. Ny tsy fisian'ny fijery mangarahara eo amin'ilay resaka no mampirefarefa ilay adihevitra ho any amin'ny ambaratonga fandrisihana ny tarika eo an-toerana, izay tsy nahazo ny isa.
Mahamenatra fa tsy naka izay eritreritra momba ny fiantohan'ny lalam-panorenana ny fahalalahana maneho hevitra izay Rtoa Inada, satria izay no ivon'ny olana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/14/115412/
 Nahatonga adihevitra : http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200803150077.html
 fasan'i Yasukuni: http://en.wikipedia.org/wiki/Yasukuni_Shrine
 tavela ho fampisehoana tokana ihany hatreto: http://afp.google.com/article/ALeqM5ghzb5UQgN2BgSOkpDa0hoWMGYKKQ
 famelabelaran-kevitra ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Klioban'ireo Vahiny Mpampifandray ao Japana: http://www.news.janjan.jp/government/0803/0803283785/1.php
 Manipika ny fampiasana ny volan'ny mpandoa hetra: http://takejj.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_75fa.html
 naka ny toerany mba hanohitra ilay sarimihetsika: http://ponko69.blog118.fc2.com/blog-entry-230.html
 tsy olan'ny ny havia / havanana io: http://d.hatena.ne.jp/katsuontheweb/20080311
 Naneho ny heviny momba ny hakelin'ilay tena famatsiambola: http://blog.goo.ne.jp/virginia-woolf/e/312853748126a9ae6028dc855f6d8ef6
 manambara i Ampontan: http://ampontan.wordpress.com/2008/03/15/yasukuni-the-movie/